DARAASAD: Waa kuwee taageerayaasha ugu wadanisan horyaalka Ingiriiska ee EPL? (Qiimayn cajiib ah!!) – Gool FM
DARAASAD: Waa kuwee taageerayaasha ugu wadanisan horyaalka Ingiriiska ee EPL? (Qiimayn cajiib ah!!)
(London) 12 Agoosto 2017 – Daraasad ay sameeysay Grosvenor Sport ayaa lagu ogaadey in 63 boqolkiiba ay taageerayaasha kooxaha heerka 1-aad ee Ingiriisku ay guul ay kooxdoodu gaarto ka door bidayaan in uu qarankooda Ingiriisku Koobka Adduunka qaado xagaaga soo aaddan.
Tusaale ahaan, 88 boqolkiiba taageerayaasha Burnley waxay jeclaan lahaayeen inay arkaan Clarets and Sean Dyche oo hanata horyaalka Premier League (taasoo woxoogaa u fog sida inay England hanato World Cup).
Taageerayaasha Watford ayaa 2-aad ku jira iyadoo 79 boqolkiiba door bidayaan guusha kooxdooda, iyadoo ay 3-aad ku jiraan Huddersfield oo taagan 74 boqolkiiba, waxaana la yaab leh inay kooxaha yaryari ka wadaniyad yaraadaan kuwa waawayn ee ka caalamisan.
Taageerayaasha Arsenal iyo Chelsea ayaa noqday kuwa ugu wadanisan iyagoo guul maxalli ah ka door bidaya mid caalami ah – iyagoo dabcan mid maxalli ah horay uga dhergey ilaa xad.
58 boqolkiiba waxay taageerayaasha Chelsea jeclaan lahaayeen inay arkaan xulka England oo hanta KA2018, halka Gooners-ku noqdeen taageerayaasha 2-aad ee ugu wadanisan waana 56 boqolkiiba.
Kooxda 3-aad ee ugu wadanisan waa kooxda Newcastle oo taagan 54 boqolkiiba, taasoo ka dhigan in kaliya Chelsea, Arsenal iyo Newcastle maahane inta kale aysan wax dan ah oo ballaaran ka lahayn xulka Ingiriiska.
Hoos ka eeg liiska oo idil…
Zidane oo ka hadlay heshiis kordhintiisa Real Madrid
GOOGOOSKA: Chemnitzer vs Bayern Munchen 0-5 (FC Hollywood oo halkeedii ka bilowday)